ANALAIVA - MORONDAVA : Dahalo telo rotiky ny balan’ ny fokonolona
Manjaka hatrany ny fanafihan-dahalo any amin’ny Distrikan’i Morondava. Ny alahady hariva teo notafihan’ny dahalo telopolo lahy tao amin’ny Fokontany Belalanda kaominina Analaiva ka dahalo telo no maty notifirin’ny fokonolona tamin’izany. 14 novembre 2017
Raha ny vaovao voaray dia telo andro mialohan’ny fanafihana no efa nisy resaka nandeha tao an-toerana fa hisy dahalo hanafika ka nandritra izany dia efa nivonona ny vahoaka. Tao anatin’ny telo andro io dia niala tao an-tanàna ary natory tany anaty ala avokoa ny mponina tao amin’ity fokontany ity. Efa niandry ny fahatongavan’ireo malaso ny fokonolona ary vonona tamin’ny fitaovana hanoherana ireo olon-dratsy.
Voalaza fa nitazana ny fidiran’ireo dahalo avy lavitra izy ireo nandritra ny fotoana fanafihana, tokantranon’ny lehilahy iray atao hoe Rangahy Sola avy hatrany no novantanin’izy ireo, ny sasany kosa namoaka omby. Voalaza fa io lehilahy io no tena be omby indrindra ao an-toerana ary izany no nahatonga ireo olon-dratsy nivantana tao amin’ny valan’ombiny. Nakorontana sady noentin’izy ireo avokoa ny entana lafo vidy tao amin’ilay trano. Teo am-pivoahana ireto malaso no notantazan’ny vahoaka tamin’ny basy ka raikitra ny fifampifirana ary tena nirefodrefotra ny basy nandritra ny fotoana vitsy.
Tsy nihemo-dalana mihitsy ireo fokonolona ka dahalo telo no lavaon’ny balan’izy ireo tamin’izany fa ny ambiny tafaporitsaka. Mbola voatondran’izy ireo ny faty roa fa ny iray tavela tao an-toerana. Tafaverina avokoa ireo omby 60 mahery saika hangalarina fa ireo entana tao amin’ny tranon-dRangahy Sola no lasan’ireo dahalo tamin’izany, raha ny fampitam-baovao azo.
Omaly maraina dia mbola tao an-toerana ny fatin’ny iray tamin’ireo dahalo voatifitra. Tsy voafehy tanteraka ny firongatry ny halatr’omby sy fanafihan-dahalo any amin’ny Distrikan’i Morondava sy manerana ny Nosy ankehitriny, manoloana izany anefa dia tsy atsahatry ny fitondram-panjakana ny fanondranana hen’omby mankany ivelany hatramin’izao.